Iindaba - Isileyiti seNdalo sokukhonza ipleyiti
Isileyiti seNdalo sokukhonza ipleyiti
Iiseti zeTheyibhile zeSlate zineenzuzo ezimbini ezahlukileyo xa kuthelekiswa neeseti eziqhelekileyo:
Okokuqala, zomelele kakhulu ngokuchasene nemikrwelo kwaye okwesibini, kulula ukuzikhulula kuzo zonke iindawo.
Iipleyiti zesileyiti azikhohlisi nje ngoyilo lwazo olukhulu nolunomtsalane, kodwa nangokwahluka kwazo okusebenzayo. Zingasetyenziswa njengeesethi zeetafile zokuseta itafile, njengokuphakela iipleyiti zezitya ezibekekileyo, njengeetafile okanye njengeecoasters zeentyatyambo nokunye okuninzi.
Nokuba njengemathi yokuhombisa apho unokubonisa khona useto lwakho oluhle lwendawo okanye uku-odola izitya ngokuthe ngqo, ngesileyiti sendawo uya kukwazi ukuchukumisa wonke umntu.
Kwakhona ukusuka kwindawo yokujonga indalo, iibhodi ze-slate zikhethwa kakhulu, i-slate ilitye lendalo elingenalo ukuveliswa njengezinye izinto.
Zonke ezi mpawu zenza iseti yendawo yesileyiti ingeyiyo into yokubamba inkangeleko yokwenyani kuphela, kodwa inamanqaku kwiingxoxo ze-ikholoji kunye nezenzeke.
Iibhodi ezintle ezimile okwezandla zesileyiti sendalo zibonisa i-flaked edge eyodwa, ebonelela ngesiseko somhlaba setshizi, i-charcuterie okanye izibheno. Bhala ngokuthe ngqo kwiibhodi zesileyiti samasi ngetshokhwe ukuze uleyibhelishe izinto ezikhethiweyo; Sula ngokulula ngelaphu elimanzi. Ukuxhaswa okuzivayo kukhusela iitafile.
I-Rustic Style Slate Serving Board-100% Eyenziwe ngesandla kwi-Natural Stone Slate, indawo entle yendalo iya kwenza itafile yakho yokutya ibe yodwa. Eyona ndlela ilungileyo yokukhonza itshizi, idessert kunye ne-appetizers. Ilungele ukonwabisa, ukukhonza, ukuhombisa kunye nokunye.
Yenziwe ngeSileyithi seNdalo esiseMgangathweni oPhezulu. Ibhodi yesileyiti nganye yohlukile ngemiphetho echotshiweyo. Ifakwe kwioli yeeminerali ukukhupha ubuhle bendalo!
Ngenxa yezixhobo ze-slate zendalo, i-ethe-ethe kwaye izinto ezibukhali (iimela, iifolokhwe, njl.) zinokukrwela umphezulu wayo. AYIKHO i-microwave, i-dishwasher, i-oveni kunye nestovetop ekhuselekileyo. Ihlanjwa ngesandla.
Ixesha lokuposa: Jul-05-2021